Filtrer les éléments par date : vendredi, 15 mai 2020
vendredi, 15 mai 2020 14:30
Covid-19: Resaka probabilité sy mathématiques io
Mihamitombo ny fihanaky ny aretina Covid-19, indrindra amin'ny alalan'ny fifampikasohana na "cas contact".
Raha olona 03, araky ny fahitan'ireo mpitsabo azy no amindran'ny olona iray, dia izy 03 indray mamindra amin'ny 03 isany hafa, dia efa 09 izay no voa. Izany hoe fonction exponentielle puissance 3.
Raha jerena indray ny fivezivezen'ny olona dia misy efa fahazaran'ny olona mifandray, ka dia hipetraka eo ny probabilité, na ny taha mety ahazahoan'ny olona 1 ny aretina.
Ny mpahay sondage dia mahafantatra tsara fa rehefa raisina avokoa ny sokajin'olona tokony ametrahana fanontaniana, na anaovana test, (représentativité échantillonnage), dia olona 500 ihany dia ampy anombanana ny mety ho valin'ny sondage, na test na fanontaniana.
vendredi, 15 mai 2020 14:21
Mahajanga: Tovolahy hita faty nihantona teny ambony sakoa
Vatana efa tsy nisy aina no hitan’ny olona nihantona teny ambony sakoa teo Mahajanga Be androany maraina. Nifatotra tariby ny tendany ny nahitana azy nihatona tamin’ny sampan-kazo.
Ny mpamonjy voina no nampidina ny vatana mangatsiaka. Tonga nanao fitsirihana ny mpitsabo avy ao amin'ny BMH, tombanana ho tamin'ny 4 ora maraina tany ho any no nahafaty an’ilay tovolahy.
Famonoan-tena sa inona no ambadik’izao ? Misokatra ny fanadihadihana ahafantarana ny antony.
vendredi, 15 mai 2020 14:15
Tafika: Voasambotra ilay miaramila Adzidà sandoka
Misandoka ho miaramila Adzidà izy, ary milaza ho mahatafiditra olona hiasa eo anivon'ny Fiadidian'ny Repoblika sy Primatiora, ary afaka manao "rengagement" ka misoloky mangataka vola amin'ireo olona te hiditra amin'izany sampana voalaza teo izany.
Nanaovan'ny miaramilan'ny CAPSAT vela-pandrika ka voasambotra omaly 14 may 2020 ilay miaramila sandoka.
vendredi, 15 mai 2020 14:01
Ikalalao – Ambohimahasoa: Basy miisa 271 naterin’ny olona an-tsirapo tato anatin’ny roa volana
Resy lahatra ireo olona vonona ny hampanjaka ny fandriampahalemana ao amin’ny Kaominina Ikalalao, Distrika Ambohimahasoa, Faritra Matsiatra Ambony, ka basy miisa 271 no naterin’izy ireo an-tsirapo teny amin’ny biraon’ny Kaominina tato anatin’ny roa volana taorian’ny fanentanana nifarimbonan’ny avy amin’ny Zandarimariam-pirenena sy ny mpitondra taty an-toerana.
Nahitana basy kalachnikov iray tamin’ireo sy vodim-bala efa nipoaka. Efa eo ampelatan’ny Zandarimariam-pirenena avokoa ireo fitaovam-piadiana ireo ankehitriny.
vendredi, 15 mai 2020 13:32
Covid-19, dengue ary tazomoka: Manolotra soso-kevitra ny KMF/CNOE
Manoloana ny valanaretina Covid-19, dengue ary tazomoka izay mampikatso ny firenena dia nandroso soso-kevitra ny KMF/CNOE–Fanabeazana Olompirenena ho fandraisana andraikitra amin’ny ady izay atrehina.
Aoka ho hentitra tanteraka ireo tompon'andraikitra isan’ambaratongany amin’ny fampiharana sy fampanajàna ireo fepetra fiarovana ara-pahasalamana.
Hanamaivanana ny olana ara-tsosialy dia mety kokoa, hoy ny KMF/CNOE raha sokafana ny ora fiasàna ho an’ireo asa sy toeram-piasàna afaka manaja tanteraka ireo fepetra fiarovana rehetra. Ireo sehatr’asa hafa sy ireo toeram-piasàna tsy manana antoka fa afaka manaraka ny lamina kosa dia andraikitry ny Fitondràna ny mijery sy manome tohana manokana azy ireo.
vendredi, 15 mai 2020 11:45
15 mai: Journée Internationale des familles
vendredi, 15 mai 2020 11:15
Fiompiana akoho: Nitotongana ny vidiny
Mandalo fahasahiranana tanteraka ireo mpiompy akoho falaina nofo, poulet de chair, satria tsy mandeha ny tsena, tsy manam-bola ny mpanjifa, nefa ny akoho iray volana sy tapany na roa volana ihany no azo tazonina, satria biby alebeazina aingana, no tsy mampiasa vakisiny fanefitra amin'ny aretina.
Tao anatin'ny fihibohana izay, dia efa tratra ny 2kg amin'ny akoho iray, nefa tsy azo tazonina intsony, miakatra ny mason-karena amin'ny sakafo sy ny fikarakarana azy, nefa ny mpandray tsy misy.
8 000ariary ankehitriny ny 1kg amarotana azy amin'ny mpanjifa, raha 10 000 - 12 000 ariary izany teo aloha, 6 000 ariary no andraisan'ny mpivarotra ny kilao, nefa 3 000 ariary ny zanak'akoho kely vao ampitomboina, mbola eo ny sakafony sy ny kojakoja maro, ary ny karaman'ny mpiasa.